Ajụjụ - JINDONGCHENG ELECTROMECHANICAL Equipment CO., LTD.
Magnetik igbe na Pan breeki 320E
Magnetik igbe na Pan breeki 420E
Magnetik igbe na Pan breeki 650E
Magnetik igbe na Pan breeki 1000E
Magnetik igbe na Pan breeki 1250E
Magnetik igbe na Pan breeki 2000E
Magnetik igbe na Pan breeki 2500E
Magnetik igbe na Pan breeki 3200E
Mpempe akwụkwọ metal na-ekwe igwe
Plasma ọnwụ igwe
ARkpacha ajị igwe
Nchikota ikwa osisi egbutu ROLL
HYDRAULIC anwụrụ BENDER
ELCTRIC HAND-HELD SEAMING igwe
HYDRAULIC RIVETING igwe
INBINRIN ND MA ỌRT
IHE SLOTTED CLAMPBAR
TUBE pịa ngwaọrụ
Q Olee otú ị na-eji igwe?
A Ị na-etinye gị sheetmetal workpiece na n'okpuru clampbar, ịgbanwee na clamping, mgbe ahụ sere isi handle (s) gbanwee workpiece
Q Olee otú e clampbar mmasị?
A Na were, ọ na-ẹkenịmde ala site a nnọọ ike electromagnet. Ọ na-adịghị na-adịgide adịgide mmasị, ma ọ dị na ya ziri ezi ọnọdụ site a spring-kwajuru bọl na onye ọ bụla ọgwụgwụ.
Ndokwa a na-ahapụ gị na-etolite mechiri emechi sheetmetal shapes, na-na-gbanwee ka ndị ọzọ clampbars ngwa ngwa.
Q Gịnị bụ kacha ọkpụrụkpụ mpempe akwụkwọ ya ga-ehulata?
A Ọ ga-ehulata 1.6 mm nwayọọ ígwè mpempe akwụkwọ na zuru ogologo nke igwe. Ọ nwere ike na-ehulata thicker na mkpumkpu ogologo.
Q Gịnị banyere aluminum na igwe anaghị ata nchara?
A es, na JDC ekwe igwe ga-ehulata ha. The ndọta-aga site na ha na akwusila ala clampbar n'elu sheet.It ga-ehulata 1.6 mm aluminum na zuru ogologo, na 1.0 mm igwe anaghị agba nchara na zuru ogologo.
Q Olee otú ị na-eme ya mwekota?
Ị pịa na nwa oge jide green "Malite" button. Nke a mere ka ìhè ígwé na clamping. Mgbe ị na sere isi handle ya na-akpaghị aka switches ka zuru ike clamping.
Q Olee otú ọ na-ehulata?
A Ị na-etolite gbagọrọ agbagọ aka site Anam Udeme isi handle (s). Nke a na-ehuda na sheetmetal gburugburu n'ihu ihu clampbar nke a na ẹkenịmde ke ebe magnetically. The adaba n'akuku ọnụ ọgụgụ na ahụ na-agwa gị na n'akuku nke-ekwe ákwà n'oge niile.
Q Olee otú ị hapụ workpiece?
A Dị ka ị laghachi isi aka na magnet na-akpaghị aka switches anya, na clampbar Pop bu mmiri ogwu na ya mmiri-kwajuru n'ịchọpụta bọọlụ, na-atọhapụ ndị workpiece.
Q Ga-adịghị n'ebe na-mmapụta ndọta-ekpe na workpiece?
A Oge ọ bụla igwe tụụrụ anya, a obere reverse usu nke ugbu a na-zitere site na electromagnet ka edepuchaala magnetise ma ọ na workpiece.
Q Olee otú ị ga-agbanwe maka metal ọkpụrụkpụ?
A Site mejupụtara adjusters na onye ọ bụla na njedebe nke isi clampbar. Nke a gbanwere ekwe nwechapụ n'etiti n'ihu clampbar na-arụ ọrụ n'elu ekwe doo mgbe doo bụ na 90 Celsius ọnọdụ.
Q Olee otú ị na-etolite a akpọrepu ihu?
A Site na iji JDC ekwe igwe kechie sheetmetal nwayọọ nwayọọ na gburugburu a ogologo nkịtị ígwè anwụrụ ma ọ bụ na gburugburu ụlọ mmanya. N'ihi na igwe-arụ ọrụ magnetically ọ pụrụ mwekota ihe ndị a.
Q Ò nwere pan-breeki clamping mkpịsị aka?
A Ọ nwere a set nke obere clampbar agba nke nwere ike plugged ọnụ maka akpụ igbe.
Q Gịnị locates obere agba?
A The plugged ọnụ agba nke clampbar ga-emi odude aka na workpiece. Ma n'adịghị ka ndị ọzọ pan brek, n'akụkụ nke gị igbe nwere ike ịbụ nke na-akparaghị ókè dị elu.
Q Gịnị bụ slotted clampbar maka?
A Ọ bụ n'ihi na akpụ na-emighị emi trays na igbe na-erughị 40 mm miri emi. Ọ bụ dị ka nhọrọ amara na bụ ọsọsọ iji karịa ọkọlọtọ obere agba.
Q Gịnị ogologo tree nwere ike na slotted clampbar n'ogige atụrụ?
A Ọ nwere ike na-etolite ọ bụla ogologo nke tree n'ime ogologo nke clampbar. Ọ bụla ụzọ nke ohere mpere na-enye maka mgbanwe nke nha karịrị otu 10 mm nso, na ọnọdụ nke ohere mpere e jiri nlezianya na-arụ ọrụ na-enye ihe niile kwere omume nha.
Q Olee ike bụ magnet?
A The electromagnet nwere ike mwekota na 1 tonne nke ike ọ bụla 200 mm n'ogologo. Ka ihe atụ, 1250E clamps aka 6 ise n'elu ya zuru ogologo.
Q ga-ndọta nká?
A dịghị, n'adịghị adịgide adịgide nju, na electromagnet ike nká ma ọ bụ daa mbà n'ihi iji. Ọ na-mere nke larịị elu-carbon ígwè na-adabere naanị na ihe eletrik na a eriri igwe n'ihi na ya magnetisation.
Q Gịnị mains ọkọnọ dị mkpa?
A 240 volts akanamde. The nta ụdị (ruo Model 1250E) na-agba ọsọ site na nkịtị 10 Amp tinyekwa. Ụdị 2000E na elu mkpa a 15 Amp tinyekwa.
Q Gịnị ngwa-abịa dị ka ọkọlọtọ na JDC ekwe igwe?
A The guzoro, backstops, zuru-ogologo clampbar, a set nke obere clampbars, na a ntuziaka na-niile ọnọ.
Q Gịnị Nhọrọ ngwa?
dị na-agụnye a warara clampbar, a slotted clampbar maka akpụ emighị emi igbe ọzọ conveniently, na a ike shiee na ndu n'ihi na ogologo distortion-free ọnwụ nke sheetmetal.
Q nzipu Ụbọchị?
Kwa modle nwere na ngwaahịa, Anyị nwere ike ndokwa mbupu ka ị ASAP
Q Mbupu akụkụ?
320E: 0.5mx 0.31mx 0.28m = 0.053m³ @ 30 n'arọ
420E: 0.68mx 0.31mx 0.28m = 0.06m³ @ 40 n'arọ
650E: 0.88mx 0.31mx 0.28m = 0.08m³ @ 72 n'arọ
1000E: 1.17mx 0.34mx 0.28m = 0.11m³ @ 110 kg
1250E: 1.41mx 0.38mx 0.33m = 0.17m³ @ 150 kg
2000E: 2.2mx 0.33mx 0.33m = 0.24m³ @ 270 kg
2500E: 2.7mx 0.33mx 0.33m = 0.29m³ @ 315 kg
3200E: 3.4mx 0.33mx 0.33m = 0.37m³ @ 380 kg
650 Powered: 0.88mx 1.0mx 0.63m =0.55³@120kg
1000 Powered: 1.2mx 0.95mx 0.63m =0.76³@170kg
1250Powered: 1.47mx 0.95mx 1.14m =1.55³@220kg
2000 Powered: 2.2m x0.95m x 1.14m =2.40³@360kg
2500Powered: 2.7mx 0.95mx 1.14m =3.0³@420kg
3200Powered: 3.4mx 0.95mx 1.14m =3.7³@510kg
Q Nlereanya shapes
Hems, ọ bụla-n'akuku bends, akpọrepu n'ọnụ, Stiffening ọgịrịga, Emechiela ọwa, igbe, etre folds, Deep ọwa, Laghachi bends, Deep ntù
1. Ọtụtụ ukwuu egosipụta ka ot sheetmetal benders.
2. Ọ dịghị mmachi ka omimi nke igbe.
3. nwere ike na-etolite miri ọwa, kpam mechiri emechi ngalaba.
4. Automatic clamping na unclamping pụtara ngwa ngwa ọrụ, obere ike ọgwụgwụ.
5. Ezi na-aga n'ihu nke na-egosi doo n'akuku.
6. Ndenye na ezi mwube nke n'akuku akwụsị.
7. Unlimited akpịrị omimi.
8. enweghị njedebe ogologo ekwe na nkebi bụ omume.
9. Open biri imewe na-enye ohere ịkpakọba mgbagwoju shapes.
10. Machines nwere ike ganged end-na-ọgwụgwụ maka ogologo ekwe.
11. adapts mfe ka ahaziri tooling (mwekota Ogwe nke pụrụ iche cross-ngalaba).
12. Self-echebe - igwe-apụghị ṅụbigara.
13. mma n'anya, kọmpat na n'oge a haziri.
School oru : ngwá ọrụ igbe, letterboxes, cookware.
Electronics : Chassis, igbe, racks.
Marine oyiyi akwa.
Office ngwá : shelves, oche, na kọmputa-ila.
Food nhazi : igwe anaghị echekwa & bench n'elu, iyuzucha hoods, vats.
Ìhè ịrịba ama & metal lettering.
Heaters & ọla kọpa canopies.
Manufacturing : prototypes, mmepụta ihe, ígwè mkpuchite.
Ọdụdọ : switchboards, enclosures, ìhè oyiyi akwa.
Automotive : di ike, ìgwè ndị njem, van ozu, ọduọ ụgbọala.
Agriculture : ígwè, bins, feeders, igwe anaghị Mmiri ara ehi na ngwá, na-amụkwasị.
Building : flashings, facias, ụgbọala ụzọ, shopfronts.
Garden amụkwasị, iko-ụlọ, ngere posts.
Ntụ oyi : ducts, mgbanwe iberibe, jụụ ụlọ.
Q The pụrụ iche centerless compound adabere
nke e mepụtara karịsịa maka JDC Rọgọọ ™, na-na-ekesa tinyere ogologo nke-ekwe ákwà ma si otú ahụ, dị ka clampbar, na-ekwe ibu nso ebe ha bụ ndị generated.The jikọtara mmetụta nke magnetik clamping na pụrụ iche centerless adabere n'aka na JDCBEND ™ bụ nnọọ kọmpat, ohere na-azọpụta, igwe na a nnọọ elu ike na-arọ ruru.
maka ịchọta ndị workpiece
Q Slotted clampbars
maka akpụ emighị emi igbe ihe ngwa ngwa
Q Special tooling
nwere ike ngwa ngwa improvised si iberibe ígwè na-enyere n'ogige atụrụ na-elu-ike shapes, na maka mmepụta ọrụ ọkọlọtọ clampbars nwere ike dochie anya pụrụ iche tooling.
Q Operating ntuziaka
igwe-abịa na a zuru ezu ntuziaka nke na-ekpuchi otú e si eji ígwè ọrụ dị ka nke ọma dị ka esi mee ka dị iche iche nkịtị ihe.
Q Operator Safety
na-enwekwukwa a abụọ na-eme aka eletriki interlock na ana achi achi a mma tupu clamping ike na-etinyere tupu full clamping emee.
Q Akwụkwọ ikike
12-ọnwa akwụkwọ ikike na-ekpuchi-ezighị ihe na rụọ na igwe na ngwa.
Q OEM na ODM
Anyị bụ ndị factory, anyị na-anabata OEM na ODM, na nwere iru ogologo okwu imekọ ihe ọnụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ anyị ezi uche price, magburu onwe ya ọrụ.
Q Ị nwere OA akwụkwọ
ee, anyị nwere akwụkwọ, ka m mara ma ọ bụrụ na ị chọrọ ya, m ga-eziga gị ya.
Q Ị nwere bụla gị n'ụlọnga ke USA.
Ee, anyị nwere, ka m mara ma ọ bụrụ na ị chọrọ enyemaka ọ bụla, m ga-ezitere gị na kọntaktị Tel NO.
Q Bụ akwụkwọ si dị?
ee, na akwụkwọ si dị
Products Guide - Apụta Products - Hot Tags - Sitemap.xml - IGBOB Mobile